Oil Slips as Lack Of U.S.-China Trade Talk Progress Frays Investor Nerves | Myanmar Business Today
Home Business Regional Oil Slips as Lack Of U.S.-China Trade Talk Progress Frays Investor Nerves
A Chinese government source was quoted by broadcaster CNBC on Monday as saying there was gloom in Beijing about prospects foratrade deal, with Chinese officials troubled by U.S. President Donald Trump’s comment that there was no agreement on phasing out tariffs. “We had reports overnight that the mood in Beijing was pessimistic,” said Michael McCarthy, chief market strategist at brokerage CMC Markets in Sydney. “The lack of announcement is really concerning for the demand outlook – the market is very nervous about the trade talks.”
သွင်းကုန်အခွန်များဖယ်ရှားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့အကြား ဆွေးနွေးမှုများ တိုးတက်လာမှု နည်းပါးနေသည့်အတွက် ဈေးကွက်အတွင်း စိုးရမ်မှုများပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့် အမေရိကန်‌ ရေနံဈေး နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ဈေးကျသွားခဲ့သည်။
West Texas Intermediate (WTI)‌ ရေနံဈေးသည့် တစ်စည်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့ ကျသွားခဲ့ရာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် သုည ဒသမ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျသွားခဲ့သည်။
ကြိုပွိုင့်ရေနံဈေးများမှာလည်း တစ်စည်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၂ဒသမ၃၂ ဒေါ်လာသို့ ကျသွားသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် သုည ဒသမ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျသွားခဲ့သည်။
.သွင်းကုန်အခွန်များ ဖယ်ရှားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောတူညီချက် တစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်း အမေရိကန် သမ္မတ Donald Trump ၏ မှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်ဘက်မှ အရာရှိများတွင် ပြဿနာရှိသောကြောင့် ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်၏ အလားအလာနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံဘက်က စိုးရိမ်နေကြောင်း တရုတ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
“တရုတ်နိုင်ငံဘက်က သဘောက သိပ်အကောင်းမမြင်ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကျွန်တော် ကြားရတယ်။ ကြေညာချက် တစ်စုံတစ်ရာ မထုတ်ပြန်တာကလည်း ဝယ်လိုအား အလားအလာအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်။ ဈေးကွက်မှာလည်း ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်နေကြတာရှိတယ်’’ဟု CMC Markets မှ ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာ အကြီးအကဲ Michael McCarthy က ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံကြီးနှစ်ခုအကြား အပြန်အလှန် သွင်းကုန်အခွန်များ ချမှတ်နေမှုသည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာကို ထိခိုက်ခဲ့ပြီး ရေနံကြိုပွိုင့် ဝယ်လိုအားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလားအလာကောင်းများ ကျဆင်းနေသည်။
SOURCESeng Li Peng (Reuters)
Next articleMario Shopping Kart: Nintendo Unveils Tokyo Store to Lure Casual Gamers